Embedded CPU ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ C * CORE Technology သည် Shanghai Xingkong တွင် စာရင်းဝင် သည် – Pandaily
Jan 06, 2022, 19:14ညနေ 2022/01/08 00:34:36 Pandaily
ကြာသပတေးနေ့Suzhou ကို C * CORE နည်းပညာ Co., Ltd မှ ။၎င်းသည် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း ၏ ကြယ်ပွင့် ဈေးကွက်တွင် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၄၁. ၉၈ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၆. ၅၈) ဖြင့် စာရင်းဝင် သည့် embedded CPU ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီအထိ ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၄၂ ယွမ် ၊ ၁. ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာယွမ် ၁၀. ၁ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
C * CORE နည်းပညာ R & D ကို အထူးပြု chip ကိုဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် နှင့် တရုတ် အတွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ထိန်းချုပ် embedded CPU ကို ၏စက်မှု application ကို။ ၀ န်ဆောင်မှု လုံခြုံ မှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ် မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသား မဟာ ဗျူ ဟာကို ကတိက ၀ တ်ပြု ထားပြီး ကြီးမားသော အမျိုးသား သို့မဟုတ် စျေးကွက် ၀ ယ် လို အားကြီးသော ဒေသများရှိ ဖောက်သည်များအား IP ခွင့်ပြု ချက်၊ ချစ်ပ် စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် လွတ်လပ်သော ချစ်ပ် နှင့် module ထုတ်ကုန်များ ကိုပေးသည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များကို အဓိကအားဖြင့် အဓိက နယ်ပယ် သုံးခု တွင်အသုံးပြုသည်။ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး၊ မော်တော်ယာဉ် အီလက်ထရောနစ် နှင့်စက်မှု ထိန်းချုပ်မှု; နှင့် အစွန်း ကွန်ပျူတာ နှင့် ကွန်ယက် ဆက်သွယ်ရေး ။
၎င်း၏ အလားအလာ 2009 ခုနှစ်, C * core ကို နည်းပညာ မော်တော်ယာဉ် အီလက်ထရွန်း နစ် နှင့် စက်မှု ထိန်းချုပ်မှု ချစ်ပ် များအတွက် သော့ချက် နည်းပညာ များ၏ R & D ကို စတင်ခဲ့ပြီး, embedded CPU ကို core ကို C2002 စီးရီး နှင့် မော်တော်ယာဉ် အီလက်ထရွန်း နစ် နှင့် စက်မှု ထိန်းချုပ် မှု၏ လယ်ပြင် တွင် လျှောက် ထားရန် သက်ဆိုင်ရာ SoC chip ကိုဒီဇိုင်း ပလက်ဖောင်း စတင် ကြောင်း အကြံပြု ထားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အင်ဂျင် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ် ထိန်းချုပ်မှု၊ ယာဉ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေး နှင့်အခြား ရှုထောင့် များ တွင်အသုံးပြုသော MCU ချစ်ပ် များကို ဆက်တိုက် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဤ IPO နှင့်အတူ C * Core Technology သည် အစုရှယ်ယာ သန်း ၆၀ ထက်မပို သော အများပိုင် ရောင်းချ ရန်ရည်ရွယ် ထားပြီး စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၆၀ ၂. ၅၁ သန်း ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရန်ပုံ ငွေများကို “ Cloud Information Security Chip Design and Industrial” ၊ “ C * Core CPU Core အပေါ် အခြေခံ၍ SoC Chip Design Platform ၏ဒီဇိုင်း နှင့်စက်မှု ထွန်းကား ခြင်း” နှင့် “ RISC-V Architecture အပေါ် အခြေခံ၍ CPU Core Design” စီမံကိန်း သုံးခု အတွက်အသုံးပြုသည်။
C * CORE နည်းပညာသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် Motorola တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည့် နည်းပညာ လွှဲပြောင်းမှု စာချွန်လွှာ မှဆင်းသက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ အရ Motorola သည် 32-bit microprocessor ညွှန်ကြားချက် အစုံ M-Core ကို တရုတ် သို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Shanghai Technology, SVT Group နှင့် China Digital Information Service Company တို့သည် C * CORE Technology ကိုပူးတွဲ ငွေကြေးထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။
CPU IP အရ C * CORE Technology သည် Motorola ၏ “ M * CORE Instruction Set” , IBM ၏ “ PowerPC Instruction Set” နှင့် open source “ RISC-V Instruction Set” ကို အခြေခံ၍ CPU Core ၄၀ ကျော် ၏ စီးရီး ရှစ် ခု ကိုဒီဇိုင်းထုတ် ခဲ့ပြီး 14nm Chip ကိုထုတ်ယူ နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Parametric.ai သည် Sequoia China မှ ဦး ဆောင်သော Round B ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
ထို႔အတူ C * CORE နည္းပညာ သည္ တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ ၀င္ေငြ ပိုမို ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ပထ မႏွစ္ ၀က္ အထိ ၀င္ေငြ မွာ ယြမ္ ၁၉၅ သန္း၊ ယြမ္ ၂ ၃၂ သန္း၊ ယြမ္ ၂ ၅၉ သန္း၊ ယြမ္ သန္း ၁၄၀ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။
၎င်း၏ MCU ချစ်ပ် များကို လက်ရှိတွင် မော်တော်ကား များ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နှင့် စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း များအပါအ ၀ င် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြု ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် မော်တော်ယာဉ် ဈေးကွက် သည် MCU ၏ ၃၀. ၁၃% ရှိသည်။ မော်တော်ယာဉ် များ ယေဘုယျအားဖြင့် 50-100 MCU ချစ်ပ် လိုအပ်သည်။
MCU ၀ ယ်လိုအား တိုး လာခြင်း သည်အဓိကအားဖြင့် မော်တော်ယာဉ် လျှပ်စစ်မီး ရရှိ မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်း လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင် ချက်များ၊ ADAS နှင့် ကိုယ်ပိုင် မောင်းနှင်မှု-မော်တော်ယာဉ် ဖျော်ဖြေရေး စနစ် များနှင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လွှတ်မှု စည်းမျဉ်း များ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မော်တော်ကား MCU ဈေးကွက်တွင် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စု နှစ်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်မှု ပုံစံသည် အတော်အတန် တည်ငြိမ် ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီး များဖြစ်သော NXP, Infineon, Renesas, STSemiconductor နှင့် Texas Instruments တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စျေးကွက် ဝေစု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဖြင့် ကမ္ဘာ့ မော်တော်ယာဉ် MCU ဈေးကွက်တွင် ထိပ်ဆုံး ငါး ခုကို ကြာမြင့်စွာ ကတည်းက သိမ်းပိုက် ခဲ့သည်။